दशैंमा यात्राको लागि ट्राफिकको सुझाव – MEDIA DARPAN
दशैंमा यात्राको लागि ट्राफिकको सुझाव
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १० आश्विन २०७५, बुधबार १४:२९
Passengers travel on the roof ofabus at Old Bus Park, Kathmandu on Saturday, November 14, 2015. As the festive season of Tihar ended, many people are returning to their homes from villages and as life is heading back to normal inside the city. Photo: Skanda Gautam
दशैँमा लाखौँको संख्यामा मानिस काठमाडौंबाट बाहिरिने गर्छन् । जसको लागि मंगलबारबाटै अग्रीम टिकट बुकिङ्ग खुला गरिएको छ । काठमाडौं आएर बसेकाहरु गाउँ फर्कीनको लागि दशैँ नै कुरिरहेका हुन्छन् । जसकारण पनि दशैँको यात्रा धेरैका लागि चुनौतिपूर्ण हुन्छ । अरु समयको तुलनामा दशैँको बेला यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । यात्रालाई सहज र खतरामुक्त कसरी बनाउने त ?
– ट्राफिक महाशाखाले काठमाडौंका नयाँबसपार्क, सुन्धारा, कलंकी, कोटेश्वर, बल्खुमा हेल्प डेक्सको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले टिकेटमा कसैले बढी पैसा लिएमा, भाडाको भाडाबारे जनाकारी नपाएमा वा कसैले ठग्न खोजेमा उक्त डेस्कमा गएर बुझ्न तथा उजुरी गर्न सकिन्छ । आएका उजुरी र गुनासोको आधारमा ट्राफिकले तत्कालै कारवाही गर्छ । यो डेस्क दशै, तिहार र छठ पर्वलाई मध्यनजर गरी यात्रुलाई सहज बनाउनका लागि स्थापना गरिएको हो ।
– सवारी चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी हाँकेको पनि हुन सक्छ । त्यस्तो शंका लागेमा या खाना खाने समय मदिरा सेवन गरेको थाहा लागेमा १०३ वा १०० मा फोन गरेर तत्काल जानकारी गराउनुपर्छ । जानकारी आए ट्राफिकले अर्को चालकको व्यवस्था गरिदिन्छन् ।– टिकट नपाउने, भाडा मूल्य बढी असुल्नेजस्ता घटना भएको अवस्थामा हेल्प डेस्क वा नजिक प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि १०० वा १०३ फोन गरि जानकारी गराउनुपर्छ ।
– कतिपय अवस्थामा चालकले यात्रुलाई फरक ठाउँमा झारेर अलपत्र पारिदिने घटनाहरू पनि हुन्छन् । यतिसम्म कि चालक वा सह-चालकको बोलीबचन उपयुक्त नलागेको अवस्थामा समेत उजुरी गर्न सकिन्छ ।
– लामो दूरीको बसमा चालकले अनिवार्य रूपमा दुईवटा चालक हुनुपर्छ । बीच बाटोमा सवारी चालक परिवर्तन हुनुपर्छ । यस्तो कुरा प्रहरीले थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ । यसरी चालक परिवर्तन नगर्दा थकाइका कारण चालक निदाएर दुर्घटना नै हुनसक्छ । त्यसैले चालक परिवर्तन नगरेको शंका लागेमा नजिकको प्रहरीमा खवर गरिहाल्नुपर्छ ।
– कतिपय अवस्थामा यत्रुलाई विभिन्न अपमान, सेक्सुल हृयारेसमेन्टलगायतको समस्या आइपर्न पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा चालक वा सह-चालकलाई प्रहरी कार्यालयमा रोकिदिन आग्रह गरेर उक्त व्यक्तिलाई प्रहरीका जिम्मा लगाउनुपर्छ ।
– अहिले टिकट अग्रीम बुकिङ्ग खुला गरिएको छ । यद्यपि फूलपातिसम्म पनि टिकट नपाएमा यातायात्र व्यवस्था विभागले जुनसुकै रुटको गाडी जहाँ पनि जानसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यतिबेला गाडीले कुनै परमिट र पटके लिनुपर्दैन । त्यसैले याात्रुले बस नपाउने सम्भावना कम होला ।
– विशेष गरी यात्रुले बोकेको बहुमूल्य सामग्रीको आफै ख्याल गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा उस्तै खालका दुईवटा झोला हुन्छन् र अर्को यात्रुले फरक झोला टिपेर हिँडिदिन सक्छ ।
– टिकट खरिद गर्दा सम्बन्धित काउन्टमार जानुहोला । टिकट खरिद गरेको बेला निर्धारित भाडा तिरेर गाडी, गाडी नम्बर, गाडी छुट्ने मिति सबै उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ ।
किन देखिन्छ डर लाग्दो सपना ?
इरानले ‘ठूलो मूल्य’ चुकाउनुपर्ने अमेरिकी चेतावनी